Southwest hiverina amin'ny fandaharam-potoana feno amin'ny faran'ny taona amin'ny alàlan'ny zotra vaovao Ontario-Houston
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Southwest hiverina amin'ny fandaharam-potoana feno amin'ny faran'ny taona amin'ny alàlan'ny zotra vaovao Ontario-Houston
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Ontario (ONT) tompon'andraikitra mihira ny teny avy any Southwest Airlines fa ny mpitatitra dia mikasa ny hiverina amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina feno amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ny drafitra hanombohana serivisy vaovao tsy an-kijanona eo amin'ny Inland Empire sy ny seranam-piaramanidina William P. Hobby (HOU) any Houston amin'ny 1 Novambra 2020.
"Vaovao tsara ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ity amin'ny fotoana ilantsika rehetra vaovao vaovao," hoy izy Mark Thorpe, lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Ontario Fahefana iraisam-pirenena seranam-piaramanidina. "Ny valanaretina coronavirus dia nanjary nihena 90% na mihoatra ny habetsaky ny mpandeha ary nahatonga ny maro hanontany tena raha ho tonga ao anatin'ny taona maro ny fanarenana, volana vitsy kokoa."
“Mazava ho azy ny mpandeha an'habakabaka ary ny fanambarana nataon'i Southwest dia faminaniana sahisahy sy mamporisika ny hiverina any an-danitra haingana kokoa noho ny any aoriana.”
Talohan'ny nahatongavan'ny valanaretina coronavirus manerantany, ny Southwest dia nitentina 50% mahery ny sidina ONT ary nitondra mpandeha maherin'ny 200,000 tao anatin'ny iray volana mahazatra.
Nandritra ny fihenan'ny dia an-habakabaka nanomboka ny volana martsa dia nanamarika i Thorpe fa ny ONT dia nanatsara ny kaonty mba hitazomana ireo terminal tsy hadio sy tsy misy mikraoba. Ny faritra avo lenta matetika dia diovina amin'ny famonoana otrikaretina mahomby tokoa. Ny fantsom-panafody fiarovana voatsabo miaraka amin'ny haitao mahery vaika mikraoba dia ampiasaina amin'ny tobin'ny mpandeha ary misy ny toby fanadiovana tanana manerana ny toerana.
Ampahatsiahivina ihany koa ireo mpandeha mba hanasa tanana amin'ny savony sy rano matetika ary misaron-doha mety rehefa eny amin'ny seranam-piaramanidina sy mandritra ny sidina.